Puntland oo ka walaacsan Cudurka Covid 19 oo kusii fidayo deegaanadeeda – Geelle Magazine
Kulan ay Maanta yeesheen Guddiga wacyi-gelinta iyo xakameynta Cudurka Coronavirus ee Puntland iyo Dhaqaatiirta ka howl-gasha deegaannada Maamulkaas ayaa waxaa looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa ka hortegidda iyo la tacaalida Caabuqan.
Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Puntland, Jaamac Faarax Xasan, ayaa sheegay in fayraskan uu dhibaatooyin badan ku haayo Soomaaliya, isla markaana uu yahay mid ay iska kaashanayaan Xubnaha Guddiga iyo Dhaqaatiirta sidii lagu xakameyn lahaa.
Waxa uu hadalkiisa intaasi ku daray Wasiirka in Cudurka COVID 19 uu ku faafayo guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan deegaannada Puntland, isla markaana ay jiraan dad badan oo qaba cudurkan.
Waxa uu sheegay ka sokow dadka Cudurka laga baaray ee laga helay in ay jiraan dad fara badan oo lagu arkay astaamaha xanuunkan oo ku nool Magaalooyinka Puntland, hayeeshee Puntland ay kordhineyso Goobaha dadka qaba Cudurka COVID 19 lagu karantiilo.
Deegaannada Puntland ayaa waxaa ka socda baaritaano ka dhan ah Covid 19, iyada oo ilaa hadda laga helay fayraska 38 Ruux.